Myat Shu - 2013 March
You are here : Myat Shu » Archives for March 2013
မခံနိုင်အောင် ပေါ့ပါး ဘ၀ နေ့ ညများ (၃)
Published By Myat Shu On Tuesday, March 12th 2013. Under ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
(၁၁) ထရီဇာရဲ့ ဝေဒနာတွေ ခံသာအောင် သူမကို သူလက်ထပ်လိုက်သည်။ (နောက်ဆုံးတော့ သူမအတွက် ငှားထားသည့် အခန်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည်၊ သူမ မနေတော့တာပင် အတော်ကြာလှပေါ့) ပြီးတော့ သူမအတွှက် ခွေးလေးတစ်ကောင် ပေးလိုက်သည်။ ခွေးလေးက သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ပိုင်သော စိန့်ဘားနတ်ခွေးမျိုးကနေ ပေါက်ဖွားလာခြင်း ဖြစ်သည်၊ သူ့အဖေက ဘေးအိမ်က ဂျာမာန်သိုးထိန်းခွေး၊ ကပြားခွေးလေးတွေကို ဘယ်သူမှ မလိုချင်ကြ၊ သူ့ရောင်းရင်းကြီးကလည်း သူတို့ကို သတ်ရတော့မည့်ကိန်း။ ခွေးလေးတွေကို ကြည့်ရင်း သူ မရွေးမိတဲ့ခွေးလေးတွေကတော့ အသတ်ခံရတော့မှာပဲလို့ တောမတ် တွေးမိသည်။ သူ့ကိုယ်သူ သေမိန့်ကျအကျဉ်းသားလေးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ပေးနိင်သော နိင်ငံတော် သမ္မတ တစ်ယောက်လိုမျိုး ခံစားမိသည်။ နောက်ဆုံး သူတစ်ကောင် ရွေးလိုက်သည်။ သူရွေးလိုက်တဲ့ ... Continue Reading
ပြည်ပတက္ကသိုလ်များတွင် လေ့လာသင်ယူနေသော မြန်မာစာ
Published By Myat Shu On Monday, March 11th 2013. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
Photo credit to cerebralboinkfest.blogspot.com ယနေ့ ပြည်ပတက္ကသိုလ်အချို့တွင် မြန်မာစာကို ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ် သင်ယူဆည်းပူးလျက်ရှိကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်သော ပညာရှင်များနှင့် မြန်မာစာတတ်ကျွမ်းသော ဒေသခံ ပြည်ပပညာရှင်များက သင်ကြားပို့ချပေးကြသည်။ နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာစာသင်ယူသော အစဉ်အလာသည် ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်ကတည်းက စတင်ခဲ့သော အစဉ်အလာဖြစ်သည်။ တောင်ငူခေတ်တွင် “ရုံပြည် ပသီကုလားမင်း” သည် ရခိုင်အမတ်ကြီး မဟာပညာကျော်၏ ပညာဥာဏ်ကြီးမားပုံကို သိမြင်ပြီး ကြည်ညိုလေးစားသည့်အတွက် မိမိသားအလတ်ကို အမတ်ကြီးထံ အပ်ပြီး မြန်မာဘာသာအက္ခများ သင်ယူစေကြောင်း ဓည၀တီအရေးတော်ပုံတွင် တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာကြသော ခရစ်ယာမန်သာသနာပြုများ၊ စစ်ဘက်နယ်ဘက် ၀န်ထမ်းများ၊ ဘာသာစာပေသုတေသီများ၊ မြန်မာစာသင်ရန် ပညာတော်သင်အဖြစ် ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ... Continue Reading